Best 24 Hand Tattoos Design ho an'ny lehilahy sy vehivavy - Tattoo Ideas Art
Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 24 amin'ny totozy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Aogositra 24, 2016
Avy amin'ny olo-malaza ho eny amin'ny arabe mihitsy aza, ny endrika ivelany sy tsy misy saina dia nanjary toerana mahazatra indrindra izay ahafahanao manana tatoazy. Ny tanana dia fantatra fa ny mijery indrindra amin'ny tatoazy.
Rehefa manana an'io endrika tetiky ny #hand ianao ao an-tsainao, dia aza avela hanakana anao tsy hiditra ny vidiny. Ny saran'ny tatoazy toy izany dia mety hanakivy ny olona tsy handeha raha toa ka avy amin'ny matihanina. Ny fomba tsara indrindra ahafahanao mahazo tato-tànana tatoazy tsara dia rehefa maka ny fotoanao mba hijery izay tianao.
2. Tato an-tànan-tanana sy maingoka
Ny fivarotana dia tsy mifantoka amin'ny zavatra ara-nofo intsony. Azonao atao ny mividy ny karazana tanana #tattoo tianao hatao. Ny orinasan'ny tatoazy tànana dia tsy manomboka androany.
3. Tattoos manafina tanana
Amin'izao andro izao, dia mahita olona an-jatony maro mpihira isika manao tatoazy amin'ny fomba toy izany ka tsy afaka ny hanontany tena ianao hoe ahoana no fomba hamoronany an'io karazana zavakanto io.
4. Tattoos feno tanana
Ny sasany amin'ireo mpanakanto mahay indrindra dia mety ho lafo be amin'ny fampindram-bola raha oharina amin'ny mpanakanto iray izay tsy manana fahaizana na fahaizana. Misy mpanakanto fanta-daza mitaky ora iray ary mety ho lafo be izany raha miomana amin'ny fandaniana toy izany ianao.
5. Skull & Tattoo Hand Flower
Tokony ho azonao fa na eo aza ny sarany avoakany, raha misy mpanakanto matihanina mandray anjara, ny fahazoana tatoazy mampitolagaga dia ny vokatra farany.
6. Tattoos amin'ny tanana mifampitantana
Raha mieritreritra ny hahazo tatoazy tsara tarehy ianao, dia midika izany fa mila mampiasa mpikaroka matihanina ianao, izay hanampy anao amin'izany. Tsy misy milaza ny hatsaran'ny tarehin'ny tànanao raha toa ka manana ny mpihira mety ianao ary ny toerana tonga lafatra ho an'ny fangaroanao.
7. Tontaosin'ny tanimbary
Ny vola amin'ny fahazoana tatoazy tanana dia miankina amin'ny teti-bola. Ny iray amin'ireo fanontaniana anontanian'ny olona alohan'ny handraisany tatoazy toy izao dia ny mahafantatra ny saran'ny tatoazy tànana. Mora ny mahazo tatoazy tanana raha azonao ny zavatra tena manan-danja momba izany.
8. Tattoos mavokely
Misy tato an-tànan-tànana tanana #designs an-tserasera. Azonao atao ny manamboatra ny tato-tànanao manokana mba hahatonga azy ho tsy manam-paharoa sy mahagaga.
9. Tati-tànana mampahatahotra
Tokony hanana endrika fifampiraharaha amin'ny mpanakanto ianao alohan'ny hanaiky ny zavatra nambaran'ny artista anao. Ny fihaonana amin'ny mpanakanto aloha alohan'ny handehanana tato an-tanana dia tena zava-dehibe. Ny dingana dia hanampy anao hiala amin'ny olana ary hanao safidy tsara ihany koa.
10. Cat tattoo hand
11. Tatoo tànan'ny totozy
12. Teti-tànan'ny Tiger
Maro ireo olona izay tsy vonona ny ho very amin'ny tattoos, mampiasa an'io endrika karazana io. Azonao atao ny mijoro ho vavolombelona fa ny tatoatin'ny tànana dia tsy manana fahatokisana. Azonao atao ny mamorona ny famolavolan-kevitra rehetra ao aminy ary mbola mampiseho ny halehibeny eo amin'izany. loharanon-tsary
14. Tattoos feno tanana
Tsy afaka maniry ny hanana tattoo tsy dia mahagaga ianao amin'izao fotoana izao fa misy fitomboana haingana amin'ny orinasam-panaovana tatoazy. Aiza araka ny eritreritrao no hanananao tatoazy manokana eo amin'ny vatanao? loharanon-tsary
15. Voninkazo tanana tonta
Maro ny toerana ahafahanao manoratra saingy ny tatoazy fanoratana tanana dia toerana tokana ahafahantsika maro maniry ny hanana ny antsika. loharanon-tsary
16. Mofomamy matevina
Tsy dia misy dikany firy izay tsy ho vitanao. loharanon-tsary
Tetikasa mahatalanjona tatoazy
17. Tattoos mahafatifaty tanana
Tsy misy farany ny zavatra azonao atao amin'ity tatoazy ity. Azonao atao ny mandao azy io na kely na miankina amin'ny karazana tatoazy izay tadiavinao. loharanon-tsary
18. Tattoos tanana tsotra
Rehefa tonga amin'ny fananana tattoo tsotra ny tatoazy, dia mbola azonao atao izany. loharanon-tsary
19. Fanangon-tànana tànana
Ny tatoazy natao hijerena an'io fomba io dia mahatonga anao ho mora kokoa amin'ny fametrahana endrika ary na dia ny fikolokoloana azy aza. Tsy misy farany ny zavatra azonao atao amin'ny famoronana tatoazy. loharanon-tsary
20. Tetezam-batana menavaratra
Ireo vehivavy dia afaka mandeha lavitra mihitsy aza mba hahazoana antoka fa izy ireo dia maneho sexy sy ny vehivavy miaraka amin'ny famolavolana izay ilainy eny an-tanany. loharanon-tsary
21. Tati-tànana mahery
Ny zavatra rehetra ilainao hatao dia ny mitady mpikaroka matihanina izay hanaraka ny nofinao rehefa manintona izany rafitra tonga lafatra izany aminao. loharanon-tsary
22. Tattoo tetsy tanana
Farany, inona no eritreretinao momba ny tatoazy an-tànana tahaka izao? Ny fomba fijeriny dia mahatonga azy io ho tsotra sy mampatanjaka. Ny vehivavy dia tsy afaka mijanona ho tia an'ity tatoazy ity noho ny fomba fijeriny. Azonao atao ny milaza fa mihelina ny tatoazy rehefa miezaka ny manavaka ny hafa amin'ny tattoo hafa ianao loharanon-tsary
23. Tattoo tsara tarehy tanana
24. Tattoo mahagaga
Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa Hand Tattoos Design
raozy tatoazyanjely tattoostattoos mahafatifatymoon tattoosrip tattooskoi fish tattoomozika tatoazyNy zodiaka dia mampiseho tatoazyAnkle Tattoosnamana tattoos tsara indrindraloto voninkazotattoos backeagle tattoosmehndi designfitiavana tatoazyscorpion tattooarrow tattoodiamondra tattootattoostattoo eyeelefanta tatoazytattoos voronacompass tattootatoazy lolocat tattoostattoo ideastattoo watercolortato ho an'ny vatofantsikatattoos ho an'ny lehilahytatoazy ho an'ny zazavavytratra tatoazyTatoazy ara-jeometrikatattoo infinitytattoos rahavavytatoazy voninkazoTattoo Feathertanana tatoazyhenna tattoolion tattoostattoo cherry blossomtattoos armHeart Tattoostatoazy fokotattoos crosstattoos sleevetattoos mpivadytattoos foottattoo octopustattoosmasoandro tatoazy